ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Jem Schofield | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Jem Schofield
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Jem Schofield
Jem Schofield (အရင်းအမြစ်: ဂျက်စီကာဆရာသမားလုပျ-Schofield)
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ နှင့်အသေးစား-to-အဘယ်သူမျှမ-လေယာဉ်အမှုထမ်းကဗီဒီယိုဂုရု Jem Schofield, ငါ့နောက်ဆုံးထွက်အင်တာဗျူး၏ဘာသာရပ်, များစွာသောဦးထုပ်ဝတ်ဆင်သောသူဖြစ်ပါသည်။ "ကျွန်မနေတဲ့ထုတ်လုပ်သူ, DP, ပညာရေးနှင့် theC47, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်တဲ့ Full-ဝန်ဆောင်မှုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူပေါ့, ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး, တိုင်ပင်ခြင်း, ပညာရေး, "ဟုသူကပြောတယ်။ "ကျွန်မကိုလည်းရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးပစ္စည်းကိရိယာများဒီဇိုင်းအတိုင်ပင်ခံဖြစ်၏။
"ငါသည်ဆိအတိုင်းဤခရီးစတင်ခဲ့သည်။ ငါ့အဘယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ပါသည်နဲ့ကျွန်မညဥ့်မှာ darkroom သို့လှည့်တဲ့သေးငယ်တဲ့မီးဖိုချောင်ခဲ့သည့်တိုက်ခန်းတွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကင်မရာကိုအသုံးပြု Pentax K-1000 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလယ်ပြင်၌ငါ၏အပညာရေးရန်အကြီးအက start ဖြစ်ခဲ့သည်။ အထက်တန်းကျောင်းများတွင်ကျွန်မဓာတ်ပုံနှင့်အချို့သောဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုကိုပြု၏, ဒါပေမယ့်ငါနှစ်လယ်ပိုင်း 90 ရဲ့၌ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီစတင်တိုင်အောင်ငါပြန်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုသို့ရောက် လာ. မရဖြစ်ခဲ့သည်။
"တစ်ဦးဖန်တီးမှုကုမ္ပဏီရှိခြင်းရန်အပြိုင်လမ်းကြောင်းကိုတွင်, ငါ DVD ကိုအာဏာပိုင်များ, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်များနှင့်နောက်ဆုံးမှာတည်းဖြတ်ရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မယ့် Post-ထုတ်လုပ်မှုပညာပေးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါက NAB များအတွက်ပညာရေးအကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Apple နှင့် FMC နှင့်အတူကြာမြင့်စွာဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့တယ်။
"အရာအားလုံး 2008 အတွက် plop သွားလေ၏။ ဘာမျှအခြေခံ-နီးပါးမျှအလုပ်အတွက်လာမယ့်နေ့ကိုရန်နေ့၌ဖြစ်ပျက်နှင့်အတူ, ငါ theC47 စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနေ့စဉ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး။ အဲဒီအကြောင်းအရာနောက်ဆုံးမှာတူသောကုမ္ပဏီများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါထုတ်လုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဦးဆောင် ကို Canon, Zeiss, AbelCineစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများသည်။ ဒါဟာအစ DSLR [ဒစ်ဂျစ်တယ်လူပျိုမှန်ဘီလူး reflex] တော်လှန်ရေးခဲ့, ဒါကြောင့်ငါထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အတန်းနှင့်အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲသင်ပေးဖို့စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကွာ Post-ထုတ်လုပ်မှုလေ့ကျင့်ရေးကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
"theC47 များအတွက်မူရင်းမစ်ရှင်ပညာရေးဆိုင်ရာသာခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့ကပစိဖိတ်အနောက်မြောက်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါတစ်ထုတ်လုပ်သူ, DP အဖြစ် 20 နှစ်ကျော်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုခဲ့သူတစ်ဦးနှင့်ပညာပေးအဖြစ်ငါနောက်ဆုံးမှာတဦးတည်း entity သို့ theC47 နဲ့ငါ့မူရင်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီပေါင်းစည်း နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့။ "
ငါပစ္စည်းကိရိယာများဒီဇိုင်းအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်မိမိအလုပ်အကြောင်းငါ့ကိုပြောပြရန် Scholfield မေးတယ်။ "ဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရဲ့" ဟုသူကဖြေသည်။ "ငါသည်သူတို့ကိုပိုကောင်းထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုကူညီနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ တဦးတည်းအခါသမယတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မ FJ Westcott နဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် theC47 ထမ်းသောနှစ်ခုထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ တဦးတည်း theC47 DP ကိရိယာအစုံသည်နှင့်အခြား theC47 စာအုပ်အလင်း Kit ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအလင်းပစ္စည်းများအသေးစား-to-အဘယ်သူမျှမ-လေယာဉ်အမှုထမ်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုသူတို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်သုံးနိုင်တယ်ဒါ modular အလင်း modifiers ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကိုငါဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့်ကျွန်တော်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို သာ. ကောင်း၏ tools တွေကိုဖန်တီးရန် Westcott နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်။ "
ငါသူသည်မိမိအသင်တန်းများအတွက်ဖုံးလွှမ်းသောအရာကိုအသေးစိတျမှ Schofield ကိုမေးမြန်းသည့်အခါသူကဒါဟာခေါင်းစဉ်ပေါ် မူတည်. အလွန်တိကျတဲ့သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ် "တုန့်ပြန်ပေမယ့်ငါသင်ပေးအရာအားလုံးထုတ်လုပ်မှု၏နည်းပညာနှင့်ယာဉ်န်းကျင်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ကင်မရာ, အလင်းရောင်, ချုပ်ကိုင်ထားနဲ့ audio ။ ငါအဓိကအားအသေးစား-to-အဘယ်သူမျှမ-လေယာဉ်အမှုထမ်းဖြစ်ကောင်းဤသည်နေ့ရက်ကာလအထူးသဖြင့်ဤမျှလောက် In-အိမ်သူအိမ်သားထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှု၏အကြီးမားဆုံးကြီးထွားလာအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သောအာရုံစိုက်ပါ။ "
ကြှနျတေျာ့ကိုနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကင်မရာများများ၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုအလင်းရောင်ပစ္စည်းကိရိယာများကြီးနှင့် software Schofield သည်သူ၏အတန်းထဲတွင်အသုံးပြုသည်။ "တစ်ဦး DP နှင့်ပညာပေးအဖြစ်, တစ်ခါတလေကျွန်မမေ့လျော့သောဤမျှလောက်များစွာသော tools တွေသုံးပြီးငါ!" သူကဖြေသည်။ ငါသူတို့လည်းဂီယာ-ဗဟိုပြုရတဲ့ခဲ့ကြသည်သဘောပေါက်လာသောအခါ "ပြောင်းလဲသွားပြီကြောင်းအရာတစ်ခုမှာငါ့အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်လာစဉ်အမြဲနောက်ဆုံးပေါ်များနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးမြင်နေရတယ်ဒီတော့ငါမီးဖိုချောင်စုပ်အပါအဝင်အရာအားလုံးရှိသည်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ ငါသည်ဤလက်တွေ့ကျတဲ့လျှောက်လွှာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပယ်ရှင်းသောအရာတို့ကိုများ၏ပညာရေးဆိုင်ရာဘက်မှတာခံခဲ့ရပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါကိရိယာအစုံတို့သည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ရှိ၏ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းသောကြပါပြီ, ငါသာတစ်နေ့-မှအပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အခြားသူများကအသုံးပြုလျက်ရှိသည့်အမှုအရာတို့အပါအဝင်ပေါ့သဘောပေါက် -day အခြေခံ။ ဤသည်ကိရိယာများကိုတစ်ဦးစာရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်မရှိမဆိုလိုပါ။ အဲဒီမှာ is! ဒါဟာပိုပြီးအာရုံစိုက်င့်ရဲ့, ဒီတော့လူအလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲထဲကပိုပြီးရနိုင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာ set ကို ups သို့ရနိုငျပါ။
"ငါသည်ကိုယျတိုငျနှင့်အတူရိုက်ကူး ကို Canon C200, C300MKII, Sony က FS7 II ကို, Fujifilm X-T3 နှင့်လည်း Alexa Mini ကိုရသောအခါပိုကြီးစီမံကိန်းများကိုပေါ်မှာ။ မျက်ကပ်မှန်စီမံကိန်းကို-based ဖြစ်ကြသည်။ ကို Canon နှင့်စီမံကိန်းများအများစုနှင့်လည်းဖူဂျီနဲ့ Sigma ဖန်တွေအများကြီးများအတွက် Zeiss ။ အလင်းရောင်ရပျလုံးကိုကျော်လည်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်စီမံကိန်း-မောင်းနှင်ဖြစ်ပါတယ်။ စသည်တို့ကို Westcott ရဲ့ FlexCine လိုင်း SkyPanels, Litepanels, Aputure, Fillex, ငါသစ်ကိုအလင်းအိမ်နဲ့အလင်း modifiers အချိန်အားလုံးစမ်းသပ်နေပါတယ်, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာငါ့အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲတှငျထိုပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးမြင်ရပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကျွန်မကိုလည်းချုပ်ကိုင် junkie ဖြစ်၏။ "
Schofield ဒီအောက်တိုဘာလရဲ့အနည်းဆုံးနှစ်ခုအသေးစား-to-အဘယ်သူမျှမ-လေယာဉ်အမှုထမ်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ "ကော်ပိုရိတ် & In-အိမ် Productions" နှင့် "ရုပ်ရှင်ရုံဗီဒီယိုလငျး" ပို့ချပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် New York က "FMC နှင့် NAB နှင့်အတူဒါကဆက်ဆံရေးဟာအစောပိုင်း 2000s စတင်ခဲ့" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ငါသည်အစဉ်အဆက်ကတည်းကပြပွဲမှာဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီ။ ဒါဟာငါ့ကိုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းရှုထောင့်ရှိအဖြစ် NAB နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ငါ့ထံသို့အရေးကြီးပါတယ်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများအဘို့ငါပြုမည် on-site ကိုလေ့ကျင့်ရေးမှတပါး, တကစာသင်ခန်းသို့မဟုတ်စတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနှင့်အတူတိုက်ရိုက်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဖို့ငါ၏အခွင့်အလမ်းကိုဖွင့် ။ ငါကငါ့အအမှတ်တံဆိပ်ကူညီပေးသည်ဆိုပါကမသေချာဘူး, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကလုပ်ဖို့ကိုချစ်။ ဤရွေ့ကားတစ်ရက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအသိပညာနှင့်အသေးစား-to-အဘယ်သူမျှမ-လေယာဉ်အမှုထမ်းထုတ်လုပ်မှု၏နှစ်ဦးစလုံးဟာနည်းပညာနှင့်ယာဉ်နှစ်ဖက်နှင့်ဆက်စပ်သောလက်တွေ့ကျတဲ့လျှောက်လွှာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်းတို့၏ဂိမ်းဖွင့်ချင်သောပညာရှင်များအယောင်ဆောင်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ဘို့ဖြစ်ကြ၏။
"ပထမအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု All-န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်မှုသို့တူးဖော်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါ, ပြီးတော့ခေတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာစနစ်တစ်ခုနားလည်မှု။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ငါကင်မရာ Set-ups, ဖွဲ့စည်းမှု, အသံများနှင့်, သင်တန်း, အလင်းရောင်အာရုံစိုက်ရှိရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရာလက်တွေ့ကျတဲ့အခြမ်းသို့ရွှေ့! ဒုတိယအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့လုံးလုံးအသေးစား-to-အဘယ်သူမျှမ-လေယာဉ်အမှုထမ်းထုတ်လုပ်မှု enviroments မှာအလင်းရောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ငါတို့သည်ထိုအချိန်ကာလအတွင်းသလောက်လက်တွေ့ကျသော / လက်ပေါ်နိုင်သမျှသည်အတိုင်းပြုပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအကြီးတည်နေရာ BAZA စတူဒီယို-ငါကြိမ်၏စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်သွန်သင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကယ့်ကိုဒီတစ်ခုနှင့်အတူအမြဲ frames များကိုပိုပြီးရုပ်ရှင်ကိုကြည့်အောင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာအလင်းရောင်သို့တူးဖို့ရ။ "
ငါအနာဂတ်၌သူ့အဘို့မမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်ဘာ Schofield ကိုတောင်းအင်တာဗျူးထပတ်ရစ်။ "တစ်ဦးအဖြစ် '' အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလွတ်, 'သင်တစ်ဦးကို client-based ရှုထောင့်ကနေလာမယ့်-ကအနည်းဆုံးလာမယ့်မယ့်အရာကိုသိဘယ်တော့မှ" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "23 နှစ်ပေါင်းနောက်မှငါအတက်အကျရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပေမယ့်ကျနော်ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ငါအဘို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာပိုကောင်း get လျှင်သင်ယူမှု-အသစ်လုပ်လာလိမ့်မယ်ကိုရပ်တန့်လူနေမှု-ဘူး။ ငါမှတ်မိဖို့ဒီ 'လူနေမှုပုံစံစတဲ့' 'မှာရှာဖွေနေကြောင်းမည်သူမဆိုအဘို့အရေးကြီးပါတယ်ထင်ပါတယ်။ စိတ်ထားအခြားကြီးမားသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ့သောသူတို့နှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ချင် မ သူတို့ဘဝစိတ်ဆင်းရဲပါစေ။
"theC47 ၏ပညာရေးဘက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ငါ ကြီးမားသော အစီအစဉ်များ! နောက်တစ်နေ့တဆယ်နှစ်လုံးကိုလအတွင်းငါသည်ငါ့ရုပ်သံလိုင်းပို In-depth ၏အကြောင်းအရာဖန်တီးပေးနိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒါတငါ၏အထုတ်လုပ်မှုအာကာသထွက်-ကအနည်းဆုံးအဆင့်တွင် built ခံရမြင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါမူလတန်းအာရုံကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အပြင်ဓာတ်ပုံနဲ့န်းကျင်ကိုဖန်တီးအကြောင်းအရာရှိပါလိမ့်မယ်။ ငါကလူနည်းပညာဆိုင်ရာခြမ်းနှင့်ဤလုပ်ငန်းကို၏ယာဉ်ဘက်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာသင်ယူနှင့်စာသင်ခန်းနှင့် On-line ကိုငါကအရမ်းအချိန်ကြာမြင့်စွာသောအလုပျနိုငျကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးမျှော်လင့်ကူညီပေးနေကိုချစ်! "
Jem & သည်သူ၏နေရာတွင်, အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက www.theC47.com သို့မဟုတ်သူ၏ YouTube ကို Channel ကိုမှာသွားရောက်ကြည့်ရှု www.youtube.com/thec47, သူကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏ယာဉ်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရေးသားဘယ်မှာများနှင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အဘယ်သူမျှမအမှုထမ်းဘဏ်ဍာမှသေးငယ်တဲ့ဆက်စပ်သော။
မိမိအ In-depth အွန်လိုင်းသင်တန်းများ "ရုပ်ရှင်ရုံဗီဒီယိုအလင်းပေးခြင်း" နှင့် "အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံဗီဒီယိုအလင်းပေးခြင်း" ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Lynda.com သူ၏နောက်ဆုံးဟုတ်ပါတယ်, တို့နှင့်အတူ "ကော်ပိုရိတ်ပွဲဗီဒီယို: ။ ထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးများနှင့်တင်ဆက်"
YouTube ကိုချန်နယ်: www.youtube.com/thec47
Instagram ကို: jemschofield
Facebook က: www.facebook.com/thec47
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/in/jemschofield
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 NAB Show ကို New York မြို့ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Jem Schofield NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး TheC47 2019-10-05
နောက်တစ်ခု: Clear ကို-Com / FreeSpeak Edge တင်ပြ NAB Show ကို New York မြို့မှာပွဲဦးထွက်တော်မူမည်